ANTSO AVO ho an’ny mpiandraikitra ny Commune Urbaine Antananarivo | GAZETY_ADALADALA
Filed under: anao ny fitenenana, fahasalamana, fiaraha-monina, tapatapany, toetr'andro | Tagged: amoron-dalana, Antsirabe, commune Urbaine Antananarivo, loto, marchand de rus, mpivarotra |
« ‘World Raid’ SOLOY IREO SARY »
jentilisa, on 29/11/2009 at 10:16 said:
Misaotra anao indrindra tamin’ity nosoratanao ity. Tena ilaina tokoa ny fahadiaovana. Miala tsiny aho raha miresaka politika eto na dia tsy mitovy hevitra aza isika, mahay mifanaja manko isika na dia mifanipaka aza ny hevitra matetika. Nandritra ny fifidianana ho Ben’ny tanàna farany teto Antananarivo, dia anisan’ny nankahalàna ny mpitondra ny tanàna teto ny fanaovana didy jadona. Hafa dia hafa anefa ny dikan’ny « didy jadona » tamin’ny antokon’olona sasany indrindra fa ireo izay milaza hoe madinika, hafa koa noho izany ny dikan’ny fahalalahana tamin’izy ireo. Ny fahalalahana dia hoe manao izay tiany atao… noho ny fahasahiranana. Nanditra ny fampielezan-kevitra dia tsy nokotabaisin’ny nitantana, tamin’ny alalan’ny fanendrena, ny tanànan’Antananarivo ny mpivarotra amoron-dalana nanao fanahy iniana nivarotra teny indray. Nivarotra teny indray hoy aho satria tena tsy nigika mihitsy ry zareo talohan’ny fifidianana, ny tena hitako moa dia iny manaraka an’Isotry nankeny Ambodin’Isotry iny… mazava loatra fa niteraka fankahalana ny antokon’ilay notendrena tamin’ny mpivarotra izany.
Tezitra dia tezitra aho tamin’izany hoe naninona no navela hivarotra teny ireo satria tsy hahazo ny vaton’ireo sokajin’olona ireo intsony ianao, faharoa izay fandaminana henjana izay no nankasitrahako nefa mody tsy nampiharina tamin’izany fotoana izany ka mety hampihemotra ireo izay saiky hifidy an-dry zareo ihany koa izany. Nisy mihitsy indray maka, nandalo tamin’iny amoron-dalan’Isotry iny ny mpanao fampielezan-kevitra avy amin’ilay nitantana an’Antananarivo, dia nisy ramatoa izay nitabataba nanaraka azy ireo nanao hoe: « Aza mifidy an’ireny ry zareo fa ireny ihany no tsy mamela antsika hivarotra ety… fa ny antsika i […] no hofidiantsika satria efa nampanantena izy hoe mahazo mivarotra malalaka ety isika ». Dia nihorakoraka avokoa ny mpivarotra rehetra tamin’izany tenin’ilay ramatoa izany. Vokany: Resy tanteraka… tena « ecrasé » araka ny fomba fiteny ilay nitantana teo aloha. Ary dia nanjaka tamin’ny toerana rehetra amin’izay ny mpivarotra amoron-dalana sy ny fako navelany. Izahay moa efa tsy niteny intsony satria resy ny nofidianay.
Soa ihany, soa ihany hoy aho fa manomboka mahatsapa indray ny ankamaroan’ny olona, indrindra ireo nifidy ny nandresy, na andeha holazaiko hoe manomboka miteny amin’izay satria tsy mahazaka intsony ny korontana sy ny loto misy eto Antananarivo. Nalahelo izahay rehefa nanomboka namelarana toeram-pivarotana sy niriariavana tsy nasiana hasiny intsony iny zaridainan’Analakely iray manontolo iny. Tsy nasiana hasiny intsony ny endrik’Antananarivo araka ny fijeriko. Noheveriko fa ninian’ny vao voafidy ny namelana ny olona (indrindra ny katiramia) nanao izay tiany natao tamin’ny zaridaina tsara tarehy iny satria izany hampisehoana amin’izao tontolo izao fa tena mahantra mihitsy ny olona ka tsy mahavatra intsony hikajy na hikojakoja ny vita teo aloha. Ankehitriny, velombolo indray aho satria hay mitady ny filaminan’Antananarivo sy ny fahadiovany ihany ny mponina eto. Tsy misy mahateny intsony manko ireo mpandoto tanàna, izay efa mihevitra ny tenan’izy ireo ho tompon’Analakely sy Tsaralalàna sy Soarano ary Behoririka iny. Tsy misy intsony ny manam-pahefana hiteny azy ireny. Hitako anefa fa ho sarotra dia sarotra ity raharaha iray lazainao ity satria efa mahavita mamono mihitsy amin’izay ireo mpivarotra ireo, tahaka izay nitranga teny Mahamasina. Manahy aza aho fa hisy fikomiana faobe ho vitan’izy ireo tampoka noho ny fampanantenana efa azon’izy ireo nandritra ny fampielezan-kevitra.
gazetyavylavitra, on 30/11/2009 at 10:22 said:
Misaotra indrindra an’i Zokibe Jentilisa amin’ny fanamarihana rehetra nataonao. Mino aho fa afaka handray ny anjarany amin’io fanamarihanao io daholo ny rehetra, ary indrindra indrindra fa ireo mpanao politika zatra mampanantena ny tsy azo atao ireo (na avy amin’ny andaniny izany na avy amin’ny ankilany).
Izao dia efa manambana fitokonana eo afovoan’ny arabe ny mpivarotra etsy amin’ny pavillon Analakely, noho ny fanapahan’ny tomponandraikitra hametraka ireo mpivarotra nalàna tany an-kafa mba hivarotra eo amin’izay ampahana arabe izany. Io solution ‘tip-top’ io foana no lasa vahaolana ‘maharitra’ sy saro-bahana rehefa avy eo. Efa tany amin’ny 15 taona tany ho any no nanaovana ezaka (sarotra dia sarotra) nanalàna ireo mpivarotra teo, nefa ankehitriny ve dia hiverenana indray ny fanakanana ny fifamoivoizana. Sahirana anie RAZANAMASY izay nanàla an-dry zareo teny e! Koa minoa ahy izay namoaka izany fanapahan-kevitra izany, fa dia hiongo-bolo koa hanala ireo eo raha izany no ataony. Ny fiara mitombo, ny fotohanana tsy hay lazaina, nefa ve sanatria tsy hitan’ny mpitantana izany, ka izay no nahatonga azy nandray izao fepetra izao? Tsy mino an’izany aho, fa tonga dia tsoriko hoe, VAHA OLANA VONJY TVAN’ANDRO izany. Aiza ny toerana nampanantenaina sy nolazaina fa hoe efa misy, natao handraisana ireo rehetra nalana teny rehetra teny? Any izy ireny alefa e! Rehefa zatra anie ny olona mamonjy ny toerana namindrana ny tsena foana e. Fa raha tsy izany dia ho sasatra mitady vahaolana isaky n y mihestika eto isika mianakavy.
Dia mba esory koa rangahy ireny mpivarotra mandehandeha any anaty fitohanana (embouteillege) ireny fa tena sady manorisory no mampidi-doza a!